Dhageyso: Xildhibaan Jeesow oo ka hadlay Ciidamadii Golaha Shacabka joogay oo la badalay iyo sababta loo badalay – Walaal24 Newss
March 17, 2018	Off	By walaal24
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah Xildhibaannada wada moosinka ka dhanka ah Guddoomiyaha Golaha shacabka ayaa sheegay in Ciidamada laga wareejiyay dhismaha Golaha shacabka ay daacad u ahaayeen Guddoomiye Jawaari.
Jeesow oo xalay shir jaraa’id qabtay ayaa waxaa uu sheegay in isaga uusan 3 maalmood tagin xaruntaas isaga oo sheegay in Ciidamada horay u joogay Golaha shacabka ay daac u yihiin Jawaari islamarkaana ay xildhibaannada u diidayaan in ay galaan xaruntaas.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay XIldhibaan ka mid ah Golaha shacabka oo uu sheegay in lagu bahdilay xarunta Villa Hargeysa oo lagu yiri naga bax.
“Aniga sadax maalmood Villa Hargeys ma tagin sababta aanan u tagin waxaa sabab u ahaa da ciidamadii muxu ahaa ciidamadii Gudoomiye Jawaari uu keensaday ayaa meesha jooga waxa laga yaabaa aniga iyo baabuurkeyga hadan wax nalayeelin waxa ugu waxawaaye waxa ugu yar in leysharafdilo layiraahdo magaleysid laabo, sida maantaba dhacaday Xildhibaan ka mid ah Xildhibanada ayaa Villa Hageysa tagey, asagoo Villa Hargeysa joogo ayaad arkeyseen kamariyaasha waad ka wada fiirsaneyseen video la duubay waa fiirsaneyseen Xildhibaan la leeyahay nooga bax hoolka, waa gurigii Umadda waa Villa Hargeysa waxa hortiina lagu shaqeynayay waa sharafdil”.
Daahir Jeesow ayaa sidoo kale sheegay in Guddoomiyaha Golaha shacabka looga baahanyahay in uu xafiiska banneeyo islamarkaana uu ka hor leexdo Baarlamaanka.
Guddoomiye Jawaari oo ku tilmaamay mooshinka isaga ka dhanka ah mooshin jabay, haddana oggolyahay in golaha la hor geeyo islamarkaan kulankaas lagu qabto meel dhex dhexaad ah oo ay Beesha Caalamka iyo Culimadaba joogaan islamarkaana aan lagu qaban xarunta Golaha shacabka oo ay laanta fulinta la wareegtay.
Halkan hoose ka dhageyso Shirka jaraa’id Xildhibaan Jeesow;-
Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Jubaland oo la doortay